window7version အနိမ့်ကနေ အမြင့်ကို ဘယ်လို upgrade လုပ်မလဲ
thet thet " window starter ကနေ window7ကိုပြောင်းချင်ပါတယ် ... ဘယ်လိုပြောင်းရ မလဲဟင် ..ပြောင်းလို့ရော ရနိုင်ပါသလား ..ကျေးဇူး တင်ပါတယ်"
ပြောင်းလို့ရပါတယ်. ဘာတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းရသလဲ ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံး ပြောင်းလို့ရတာတွေကို ပြောပြပါ့မယ်. အဲ့ဒါကို ကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်ဟာကို ပြောင်းသင့်သလဲ စဉ်းစားပါ. version အနိမ့်ကနေ version အမြင့်ကို Upgrade လုပ်လို့ရပါတယ်. သူ့ version အလိုက် အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်. အရင်ဆုံး ဘာလို့ ပြောင်းချင်တာလဲဆိုရင် အခုလက်ရှိ window အမျိုးအစားကို မကြိုက်ဘူး ဒီ့ထက်မြင့်တာကို upgrade လုပ်ချင်တာမျိုးလဲ ရှိသလို . Window တော့ တင်ချင်ပါရဲ့ ဒါပေမယ့် driver တွေ software တွေနဲ့ လိုအပ်တာတွေကို ပြန်တင်နေရမှာက အလုပ် တစ်ခုလို ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလဲ ရှိမှာပါ. အခုလို window upgrade လုပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် မိမိရဲ့ ယခင် တင်ထားတဲ့ driver တွေနဲ့ install လုပ်ထားတဲ့ software တွေကို ဘာတစ်ခုမှ ထိခိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး. Windows7Starter ကနေ ဆိုရင် Home premium, Professional,Ultimate သုံးမျိုးမှာ ကိုကြိုက်တဲ့ version ကို upgrade လုပ်လို့ ရပါတယ်.
Windows7Professional ကနေဆိုရင်တော့ Ultimate တစ်မျိုးကိုပဲ upgrade လုပ်လို့ရမှာပါ. အဲ့တော့ upgrade လုပ်နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်. Start ရဲ့အပေါ်မှာ Search Programs and Files ဆိုတဲ့ Search box လေးတစ်ခု ရှိပါတယ်. အဲ့ဒီ့အကွက်ထဲမှာ ပုံထဲကအတိုင်း Anytime Upgrade လို့ပဲ ရိုက်ရိုက် Windows Anytime Upgrade လို့ရိုက်ရိုက် ကြိုက်သလို ရိုက်ရှာလိုက်ပါ အပေါ်က result မှာ windows anytime upgrade ဆိုပြီးတော့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. တွေ့တဲ့ Windows Anytime Upgrade ဆိုတဲ့ icon လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ. အောက်ကပုံအတိုင်း Windows Anytime Upgrade လုပ်ဖို့အတွက် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ Next ကို နှိပ်လိုက်ပါ. ကဲ ရိုက်ထည့်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း မိမိထည့်ထားတဲ့ key ကို verifying လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်.
verify လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. I accept ဆိုတာကို တစ်ချက် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်း ထပ်ပေါ်လာရင်တော့ Upgrade ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.
အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ upgrading window ဆိုပြီးတော့ upgrading လုပ်နေပါလိမ့်မယ်. အနည်းဆုံး 10 လို့ပြောထားပေမယ့် connection ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်. အင်တာနက် speed မြန်ရင် မြန်သလိုမျိုး တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ တူညီမှာမဟုတ်ပါဘူး. နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ သူအဖို့ကတော့ 10 မိနစ်လောက် ကြာပါမယ်. အားလုံးပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ You have successfully upgraded your Windows7Starter edition. ဆိုပြီးတော့ ပေါ်လာမှာပါ. အားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. Read More
mintayza12@gmail.com "ကျွန်တော် Windows Winset2011.5 ကို Full Version မရလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ချက်လောက်ကူညီပါလား ခင်ဗျာ။တစ်ခြားဘယ်သူ့မှ တောင်းလို့မရလို့ပါ" ညီလေးရေ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် အောက်မှာ download လုပ်ပါ. license version ဖြစ်အောင်လို့ မလုပ်တတ်ရင် ပြောပြပေးပါ့မယ်. ဒီ software ဟာ ကွန်ပျူတာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာတို့၊ ဖိုင်ကို Encrypt and decrypt လုပ်ပေးခြင်း၊ backup လုပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးတာပါ. အောက်မှာ ရေးပြထားပါတယ်.
License version ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.
software ကို install လုပ်ပါ
ဒေါင်းထားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ crack ကို သူ့ရဲ့ ဖိုင် location ထဲကို သွားထည့်ပါ.
ပြီးတာနဲ့ အထဲမှာပါတဲ့ registry key file ကို Double click နှိပ်လိုက်ပါ. မေးလာရင် Ok ပေးလိုက်ပါ. တစ်ခုသတိထားရမှာက အဲ့ဒါတွေကို လုပ်နေစဉ်မှာ windows winset 2011 program ကို ပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်. - Customize folder icon by Windows Winset.
- Customize file or folder attribute by Windows Winset.
- Customize desktop icons arrangement by Windows Winset.
- Clean system trace files by Windows Winset.
- Scan and clean up computer junk files by Windows Winset.
- Scan and clean up Windows registry by Windows Winset.
- Scan and repair Windows system vulnerability automaticlly by Windows Winset.
- User Account Control (UAC) manage by Windows Winset.
- Immunize disk partition of computer by Windows Winset.
- Backup and restore whole Windows registry by Windows Winset.
- Togetheracollection of Windows tools.
- Encrypt and decrypt private documents by Windows Winset.
- Compress and extract 7z format files by Windows Winset.
- Delete files completely and safely by Winodws Winset.
- Use Free Windows7 360 days by Winodws Winset.
- Use the virtual desktop by Winodws Winset.
- Shutdown the computer automatically timer by Windows Winset.
- Automatic check new E-Mail by Windows Winset. Download mirrorcreator | ifile | Mediafie | zshare | ziddu | megaupload
Mobile Games များစုစည်းမှု့
သန့်ဇင်ထွဋ် "အကိုရေ ဖုန်းအတွက် ဂိမ်းလေးတွေ ရှိရင်တင်ပေးပါဦးဗျာ. ကျွန်တော်ရှာတာ လုံးဝအဆင်မပြေလို့၊ အဆင်ပြေတော့လဲ ဂိမ်းက ဆော့လို့သိပ်မကောင်းဘူး. အဲ့ဒါ ဂိမ်းစုံစုံလေး တင်ပေးပါဦးနော် အစ်ကို အားကိုးပါတယ်" ကဲအားလုံးကို ပေါင်းပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. ဂိမ်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်. ကိုကြိုက်တဲ့ ဂိမ်းကိုတင်လိုက်ပါ. အားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. ပါတဲ့ဂိမ်းနာမည်တွေကတော့
ကဲရှိသမျှဟာ အကုန်လုံးကို တင်ပေးလိုက်တယ်နော်. စိတ်ကြိုက်သာရွေးပြီးတော့ ထည့်ပေတော့ ကိုသန့်ဇင်ရေ. အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ.
ဖြုတ်မရတဲ့ avira antivirus software ကို ဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲ
hanhtutaung27: အကို..တစ်ခုလောက် ကူညီပါအုံးနော avira ဖြုတ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေလို့. ဘယ်လိုမျိုး ဖြုတ်ရ မလဲ ပြောပေးပါ .
ကိုဟန်ထွဋ်အောင်ရေ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ avira removel tool နဲ့ ဖြုတ်လိုက်ပါ. တစ်ခါတစ်လေ အဲ့လိုမျိုးပဲ ဖြုတ်မရတဲ့ အခါတွေမှာ removal tool တွေနဲ့ ဖြုတ်မှ ပြုတ်တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်. အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. Download mirrorcreator | ifile | mediafire | zshare | ziddu | megaupload
canon Mp series resetter tool
စိုင်းဆေပန်ဖ "ကိုကြီး ..ညီလေးကို Cannon Mp-259 resetter လေးကူညီပါဦး ကျွန်တော်မရှာတတ်တော့လို့ပါ"
ကိုစိုင်းဆေပန်ဖရေ canon MP series အားလုံးအတွက် resetter လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်ဗျာ.
Ink Level - shows the level of occupancy ink:
MG - colored Magenta ink cartridge.
YL - Yellow colored ink cartridge.
WP - "additional" container for the waste of ink.
Mirrorcreator | Mediafire | ifile.it | Zshare | Ziddu | Megaupload
ဒီစာအုပ်ကလေးကတော့ A+ သမားများအတွက် လုံးဝသိထားသင့်တဲ့ အကြောင်း အရာတွေချည်းကိုပဲ ထုတ်နှုတ်ရေးသား ထားတာပါ. ပြီးတော့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဘယ်လိုစာမေးပွဲတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုလဲ ထည့်သွင်းရေးသား ထားပါတယ်. ဒီစာအုပ်ကိုတော့ ကွန်ပျူတာ အခြေခံပိုင်း သိထားတဲ့သူတွေအဖို့ ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်. ဒါမှလဲ မေးလာတဲ့ မေးခွန်းအတွက် လွယ်လင့် တကူ ဖြေဆိုနိုင်မှာပါ. အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
mirrorcreator | ifile.it | mediafire | zshare | ziddu | megaupolad
နောက်ဆုံးထွက် Internet Download Manager v6.07 Build 12.
internet download manager ကလဲ အသစ်ထွက်လာလို့ update တောင်းနေပြီ ထင်ပါတယ် . update လုပ်လိုက်လို့ ကီးထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ အဆင်ပြေသွား တဲ့သူတွေရှိသလို အဆင်မပြေတဲ့သူလဲ ရှိပါလိမ့်မယ် . အဆင်မပြေတဲ့ သူများ အတွက်ကို keygen ရော patch ကော ထည့်ပေးထားပါတယ်. အားလုံး အဆင်ပြေပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. Mirrorcreator | ifile.it | mediafire | ziddu | zshare Read More
Window7activated မဖြစ်သူများနှင့် Genuine မဖြစ်သူများအတွက်
အခုဒီနေ့အထိ ထွက်သမျှ loader ထဲက အကောင်းဆုံးနဲ့ အဆင်အပြေဆုံး loader တွေကို ပေါင်းပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. version 2.0.2,5,6,8 လေးမျိုး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. 2.0.8 ကတော့ နောက်ဆုံးထွက်ပါ. အရင်က တင်ပေးတဲ့ window7loader နဲ့ အဆင်မပြေသူများ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ loader နဲ့ စမ်းလိုက်ပါ ရကို ရသွား ပါလိမ့်မယ်. သုံးနည်းကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ. install လုပ်လိုက်ပြီး ခဏစောင့်လိုက် ကွန်ပျူတာကို restart တောင်းရင် restart ပေးလိုက်ပါ. window activated ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်. အထဲမှာ license key ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်. window7version အားလုံးအတွက် ပါပါတယ်. loader တွေကတော့ မကြာခဏ အဖျက်ခံရပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူး. တင်ထားတာ အဖျက်ခံရလဲ ထပ်တင်ပေးပါ့မယ်. အမြန်ဆုံးသာ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ. မရှိမဖြစ် ဆောင်ထား သင့်ပါတယ်. Download mirrorcreator | ifile.it | mediafire | zshare | ziddu | megaupload
Pay Pal button လုပ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း
ကျွန်တော် လတ်တလော ၀ဘ်ဆိုက် ၃ ခုကို တာဝန်ခံပြီးလုပ်ပေးနေပါတယ်. လုပ်ပေးရတာ အခက်အခဲမရှိပေမယ့် ပိုက်ဆံလွှဲတဲ့အခါကျရင် အရမ်းဒုက္ခရောက်ပါတယ်. နော်ဝေးက ကိုစောကျော်ဦး ၀ဘ်ဆိုက်ကို လုပ်ပေးလို့ သူငွေပို့တဲ့အခါမှာ ထိုင်းဘဏ်ကနေ တစ်ခါပို့ရင် ဘတ်(၉၀၀) ဖြတ်ပါတယ်. ဘယ်လောက်ပဲ ပို့ပို့ပါ. ဘတ် ၃၀၀၀ ပို့တာ ဘတ်(၉၀၀)ဖြတ်တော့ ဘယ်မှာ ကျန်ပါတော့မလဲဗျာ. အဲ့ဒါနဲ့ paypal ကနေ ငွေလွှဲလို့ရအောင် လုပ်လိုက်ရတာပါ. ပြီးတော့ တစ်ချို့က ၀ဘ်ဆိုက်အတွက် တတ်နိုင်သလောက်လေး လှူချင်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်. နာမည်တွေ ထည့်မပြောပါနဲ့ဆိုလို့ နာမည်မဖော်ပြတော့ပါဘူး. အဲ့တော့ ကျွန်တော် မှာ အချက်နှစ်ချက်ပဲ ရှိပါတယ်. အခုကျွန်တော် ၀ဘ်ဆိုက်တွေကိုလည်း လက်ခံပြီး ရေးပေးနေပါပြီ. အဲ့အတွက် ဘဏ်ကနေ ငွေလွှဲစရာမလိုပါဘူး . ကျွန်တော့် paypal account ထဲကို ငွေလွှဲပို့ပေး ရင်ရပါပြီ. Proxy ၀ယ်ချင်သူများ၊ နိုင်ငံခြားကနေ ၀ဘ်ဆိုက်အပ်လုပ်ချင်သူများ အတွက် အလွယ်တကူ ငွေလွှဲလို့ ရအောင်လို့ လုပ်ထားတာပါ ပြီးတော့ www.nyinaymin.com လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင် ၀ဘ်ဆိုက်ဆက်ပြီး ရှင်သန်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်သလောက် အကူအညီပေးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြားက ညီအစ်ကိုများအတွက်. ဒီနှစ်ချက်နဲ့ paypal button ကို လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ.
၀ဘ်ဆိုက် အပ်ချင်သူများ nyinaymin.org@gmail.com ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်. လိုချင်တဲ့ Design၊ website အမျိုးအစားနဲ့ ထည့်ချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုတော့ မေးလ်နဲ့ပို့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်. ၀ဘ်ဆိုက်ကို အဆင်လဲပြေ ဈေးနှုန်းလဲ ချိုသာအောင်လို့ အနည်းဆုံးဈေးနဲ့ ရေးပေးနေပါတယ်. အားလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Read More
window7version အနိမ့်ကနေ အမြင့်ကို ဘယ်လို upgra...
ဖြုတ်မရတဲ့ avira antivirus software ကို ဘယ်လိုဖြုတ...
A+ စာမေးပွဲအတွက် သိထားသင့်တဲ့ မေးခွန်းနှင့်အဖြေမျာ...
Window7activated မဖြစ်သူများနှင့် Genuine မဖြစ်သ...